Wasiirka shaqada Norway oo Corona-virus laga helay. - NorSom News
Wasiirka shaqada Norway oo Corona-virus laga helay.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Norway, Torbjørn Røe Isaksen oo xisbiga Høyre katirsan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in laga helay cudurka Corona-Virus. Sidoo kalena wasiirka caafimaadka, iyo wasiirka qoyska iyo sinaanta ayaa iyagana kujiro karantiilis, kadib markii looga shakiyay inay cudurka qaadeen.
Wasiirka shaqada Norway ayaa sheegay inn xaaladiisu ay aad u fiicantahay, kadib markii uu dareemay calaamado fudud oo cudurka ah. Isaga oo sheegay inuu si caadi ah uga soo shaqeyn doono gurigiisa, xitaa hadii uu qaaday cudurka oo karantiilis lagu sameeyay.
Wasiirka shaqada Torbjørn Isaksen ayaa sheegay inuusan tagin wadamada uu cudurku ku fiday ama uusan ogeyn inuu la kulmay dad cudurka qaba.
Wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa shaley laga celay cudurka, kadibna waxaa baaritaan lagu sameeyay wasiirka oo isna cudurka laga helay.
Dowlada ayaa hada baaris ugu jirto dadkii uu wasiirku la kulmay, si loo ogaado dad kale oo cudurka qaaday.
Xigasho/kilde: Torbjørn Røe Isaksen har fått påvist smitte av coronavirus.
Previous article45.000 qof ayaa NAV lacag ka dalbaday 5 maalin gudahood.
Next articleTrandum: Norway oo xabsiga kasii deysay qoxooti ay rabtay inay dalalkoodii u celiso.